About Us - Xinhong ngeImeyile & Elec Co., Ltd.
Iimeko zamatyala efowuneli
Imaski yobuso yolwaziso
Iphepha lokuTshisa kobushushu
Ukuhanjiswa kobushushu Vinyls
Yasekwa ngo-2002, iXinhong Iqela iphinde yenziwa kwaye yandiswa imisebenzi yayo ngo-2011, igxile kuphando kunye nophuhliso, ukuqhubela phambili nokukhuthaza izixhobo zokuhambisa ezishisayo kangangeminyaka eli-18. Iqela leXinhong lifumene isiqinisekiso solawulo lwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 eneemveliso ze-CE (EMC, LVD, MD, RoHS), kwaye yafumana inani lepatenti yekhaya nangaphandle. Iqela laseXinhong liphakamisa ifilosofi yeshishini yabathengi kuqala, yamkela utshintsho, ukusebenzisana, ukuthanda, ukuthembeka kunye nokuzinikezela. Qhubeka kwiimfuno zabathengi, sinamathela kwisimo sokusebenzela abathengi ngcono, kwaye sizimisele ukuyila iimveliso kunye nokuphucula amava omsebenzisi, ngoko ke amaqela abathengi abanzi ayonwabela imveliso ekumgangatho ophezulu, ezinzileyo, kunye nexabiso eliphantsi. Iimveliso ezenziwe nguXinhong Group zijolise ekukhonzeni amaqela abaxumi abahlanu. Iqela leXinhong limema ngokunyanisekileyo uninzi lwamaqabane acwangcisiweyo ukuba ajoyine, kwaye lazise iimveliso ezininzi zeXinhong kwilizwe lazo ukuze abathengi abaninzi babelane ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye zifikeleleke!
● Ubugcisa kunye neendlela zokuzonwabisa
Olu luhlu lubandakanya i-EasyPress 2, i-EasyPress 3 kunye neMigPress Mate, ekhonza ubugcisa kunye nabathandi bezandla. Abasebenzisi banokusebenzisa umatshini wokubhala unobumba omncinci kunye. Ubugcisa I-DIY ilungele ukuhlakulela izakhono zakho buqu, yenza ngokwezifiso izipho ngokudibeneyo ukomeleza ubuhlobo phakathi kwabahlobo kunye nokukhuthaza imvisiswano yosapho
Olu luhlu lweemveliso lubandakanya izixhobo ezisisiseko, kubandakanya umatshini wokuhambisa ubushushu, umatshini wokushicilela ikomityi, umatshini wokushicilela, iprinta, iprinta yebhola, umshicileli wezihlangu, njl njl. Ezi zixhobo zihlangabezana nokususwa kwesipho kunye nokwenziwa kweDIY kokuyila, kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso. ezinje ngobuncinci, ugqithiso olutshisayo, ubushushu bokutshisa iivinyl, i-rhinestones kunye nokunye. Abasebenzisi banokuthenga iiprinta ezinjenge-EPSON kunye neRicoh ukufezekisa i-sublimation kunye nokutshintshwa kwe-thermal, okanye bathenge isakhelo esisisiseko sokulinganisa ukuthelekisa i-vinyl (HTV), esetyenziswa ngokubanzi kwizinxibo, izixhobo zemidlalo, ukuguqula izipho, njl.
● IOfisi yezobuGcisa okanye ukuvelisa
Olu luhlu lweemveliso zisebenza ngeefektri zokulungisa ubuchwephesha kunye ne studio zokujonga iimpahla Uluhlu lweTekhnoloji ye-Innovation inoxinzelelo olukhulu kunye olufana (Max. 450kg), amaqondo obushushu afanayo (° 2 ° C), kunye nokubetha okukhulu (Max.6cm). Ilungiswe ngokugqibeleleyo kwizinto ezahlukeneyo ezisetyenziselwa phezulu kunye noxinzelelo oluphezulu ezifana ne-ATT, i-Forever laser yokuhambisa iphepha, izinto ezichanekileyo zobushushu ezinje ngeTPU, kunye nokudluliselwa okufuna uxinzelelo olufanayo, njengePaneli yeAluminiyam yeAluminiyam
● Isicatshulwa seTekhnoloji okanye iMveliso yeNtengiso
Xinhong iye igama wakholosa entsimini transfer ubushushu kangangeminyaka eli-18, naye iminyaka 6 amava kushishino utsalo rosin. Namhlanje, sabeka sikhonze amakhulu amawaka abathengi ehlabathini lonke.
Indawo yeMveliso yeBaijin, Idolophu yaseBaizhang, iMinqing County, iFuzhou, kwiPhondo laseFujian, eChina
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Products afakiwe - Tags Hot - Sitemap.xml - AMP Mobile
Tshisa Press Pen Printer , Tshisa Press Labels , Label Small Tshisa Press Machine , Ball Pen Heat Press Machine , Cinezela ubushushu ngePens, Ball Heat Press Machine ,